पद्म सुन्दर मल्ल Info. About. What's This?
ⓘ पद्म सुन्दर मल्ल
पद्म सुन्दरको जन्म भक्तपुरको खौमामा चार सन्तानमध्ये तेस्रोको रूपमा भएको थियो । उनका जेठा दाजु प्रसिद्ध शिक्षाविद र लेखक जगत सुन्दर मल्ल हुन् । १० वर्षको उमेरमा दरबार हाई स्कुलमा भर्ना हुन उनी आफ्नो परिवारसित काठमाडौँको असनमा सरेका थिए । जापानी भिक्षु तथा यात्री एकाइ कावागुचीलाई भेटेपछि उनी उच्च शिक्षाको लागि जापान जान प्रोत्साहित भएका थिए ।
2. जापान र अमेरिका
सन् १९१६ मा पद्म सुन्दर र उनका दाइ, जगत सुन्दर शिक्षा विरोधी राणा शासनको बेला नेपाल सरकारको अनुमतिबिना भारतको कोलकाता गई जापान जाने जहाजमा चढेका थिए । जापानमा उनी टोक्यो इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा भर्ना भए। उनका दाजु उनको बस्ने र पढ्ने प्रबन्ध मिलाई भारत फर्के।
टोक्योमा विज्ञान स्नातक पूरा गरेपछि उनी केही जापानी साथीहरूसँग मिलेर अमेरिका गएका थिए । त्यहाँ उनी मिशिगन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने पहिलो विद्युतीय इन्जिनियर बने ।
मिशिगन विश्वविद्यालयमा हुँदा उनी छात्र सैनिकको रूपमा रिजर्भ अफिसर्स ट्रेनिङ कप्समा भर्ना भए । सन् १९२२ मा उनले विद्युतीय इन्जिनियरको डिग्री प्राप्त गरे ।
3. विद्युतीय इन्जिनियर
सन् १९२५ मा नेपाल फर्केका पद्म सुन्दरलाई आधिकारिक अनुमतिबिना देश छोडेको हुनाले काठमाडौँमा भित्रिन दिइएको थिएन । त्यसैले उनले पश्चिम बङ्गालको कर्सियाङमा बसाइ सरे । सन् १९३३ मा उनले फाजी जलविद्युत आयोजनाको स्थापना गरी कर्सियाङमा ऊर्जाको मागको आपूर्ति गरे ।
सन् १९३९ मा नेपाल सरकारले पद्म सुन्दरलाई नेपाल बोलाई मोरङ जलविद्युत केन्द्रको प्रमुख इन्जिनियरको पदमा बहाली गरिएको थियो । उनले बिराटनगर जुट मिलमा विद्युत पुर्‍याउने विद्युत केन्द्रको पनि निर्माण गरेका थिए । उनले वीरगञ्ज र धरानमा पनि विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका थिए ।
सन् १९४१ मा पद्म सुन्दरलाई संयुक्त अधिराज्यको इन्स्टिट्युसन अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्सका सहयोगी सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको थियो । सन् १९५० तिर पद्म सुन्दर काठमाडौँ फर्की आफ्नो बाँकी जीवन त्यहीँ बिताए । उनले विद्युतको क्षेत्रमा पुर्याएका योगदानका कारण उनलाई "नेपाली जलविद्युतका पिता" मानिन्छ ।
Wikipedia: पद्म सुन्दर मल्ल